အနိမ့် Dopamine Striatal D2 Receptors များသည်အဝလွန်သောဘာသာရပ်များတွင်ကြိုတင်မျက်နှာဖုံးဇီဝြဖစ်စဉ်များနှင့်ဆက်နွှယ်သည် - ဖြစ်နိုင်ချေရှိစေသောအချက်များ (၂၀၀၈) - သင့် ဦး နှောက်သည်သင့် ဦး နှောက်တွင်
ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားပံ့ပိုးအချက်များ (2): အနိမျ့ Dopamine Striatal D2008 receptor အဝလွန်ဘာသာရပ်များအတွက် Prefrontal ဇီဝြဖစ်နဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့နေကြတယ်
comments: အဝလွန်အပေါ်ဒီလေ့လာမှု, dopamine အပေါ် (D2) receptors နှင့်တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေးလည်ပတ်နိုင်ဖို့သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအာရုံစူးစိုက်။ ဤသည်သုတေသနပြုခြင်း, NIDA ၏ဦးခေါင်းကိုအသုံးပြုပုံ overeaters ဦးနှောက်လေ့လာနှစ်ခုယန္တရားများအတွက်မူးယစ်ဆေးစွဲသူများကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ကြောင်းပြသထားတယ်။ မူးယစ်ဆေးစွဲလိုပဲအဝလွန်အနိမ့် D2 receptors နှင့် hypofrontality ရှိသည်။ အနိမျ့ D2 receptors အကျိုးကိုဆားကစ်၏ desensitization အတွက်အဓိကအချက် (numbed အပျော်အပါးတုံ့ပြန်မှု) ဖြစ်ပါသည်။ Hypofrontality ဆင်းရဲသောသူတို့သည်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်နှင့်ဆက်စပ်သောတိုကျရိုကျ cortex အတွက်အနိမ့်ဇီဝြဖစ်, တိုးမြှင့်စိတ်ခံစားမှုများနှင့်အကျိုးဆက်များကိုဆင်းရဲတရားစီရင်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ အနိမ့် D2 receptors နှင့်တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေး၏အနိမ့်လုပ်ငန်းဆောင်တာများအကြားဆက်ဆံရေးရှိပုံပေါ်ပါတယ်။ ဒါက overstimulation ပေးသောသက်ရောက်မှုဟာတိုကျရိုကျ lobes./em D2 receptors အတွက်ကျဆင်းစေပါတယ်ဖြစ်ပါသည်>
FULL ဆန်းစစ်ချက်: Prefrontal ဇီဝြဖစ်အတူအနိမျ့ Dopamine Striatal D2 receptor တို့သည် Associated အဝလွန်ဘာသာရပ်များခုနှစ်တွင်: ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားပံ့ပိုးအချက်များ
Neuroimage ။ 2008 အောက်တိုဘာလ 1; 42 (4): 1537-1543 ။
2008 ဇွန်လ 13 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1016 / j.neuroimage.2008.06.002 ။
Nora ဃ Volkow, ab * Gene-ဂျက်ဖရန့် Telang က c, ဟန္နအက်စ်မုဆိုးခ, Panayotis K. Thanos, ဂျင်း Logan က c, ဒါဝိဒ်သည် Alexoff က c, Yeming မာရင်းကျိုသည်ခက c ခရစ္စတိုဖာ Wong ကdYu-ရှင် Ding, c ကိုဝမ်, နှင့် Kith Pradhanc
မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအပေါ်တစ်ဦးအမျိုးသားအင်စတီကျု, Bethesda MD 20892, အမေရိကန်နိုင်ငံ
အရက်အလွဲသုံးမှုနှင့်အရက်အပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျု, Bethesda MD 20892, အမေရိကန်နိုင်ငံခ
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာန Brookhaven အမျိုးသားဓာတ်ခွဲခန်း, Upton နယူးယော့ 11973, အမေရိကန်နိုင်ငံက c
Diagnostic ဒီယိုရောင်ခြည်ကုသမှုပညာ, ဆေးပညာ New Heaven, CT 06520-8042, အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ယေးလ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းရဲ့ဃဦးစီးဌာန
* သတင်းထောက်စာရေးဆရာ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျု, 6001 အလုပ်အမှုဆောင် Boulevard, ROOM တွင် 5274, Bethesda, MD 20892, USA ။ ဖက်စ်: + 1 301 443 9127 ။ အီးမေးလ်လိပ်စာများ: အီးမေးလ်: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်] , Email: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်] (အဲန်ဒီ Volkow) ။
တားဆီးထိန်းချုပ်မှုတွင် Dopamine ၏အခန်းကဏ္wellကိုကောင်းစွာအသိအမှတ်ပြုပြီးယင်း၏အနှောင့်အယှက်များသည်အဝလွန်ခြင်းကဲ့သို့သောအဂတိလိုက်စားမှုကိုထိန်းချုပ်သောအပြုအမူဆိုင်ရာရောဂါများကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သည်။ သို့သော် dopamine neurotransmission အားနည်းချက်ရှိခြင်းကြောင့်တားဆီးထိန်းချုပ်မှုအားနှောင့်နှေးစေသည့်ယန္တရားကိုနားမလည်နိုင်သေးပါ။ ကျနော်တို့ယခင်က morbidly အဝလွန်ဘာသာရပ်များအတွက် dopamine D2 receptors တစ်လျှော့ချရေးမှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ dopamine D2 receptors များလျှော့ချခြင်းကို inhibitory control တွင်ပါ ၀ င်သော prefrontal ဦး နှောက်ဒေသများတွင်လုပ်ဆောင်မှုနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိမရှိဆန်းစစ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် dopamine D2 receptor ရရှိမှုအကြား striatum ရှိ ဦး နှောက်ဂလူးကို့စ်ဇီဝြဖစ် (ဦး နှောက်လုပ်ဆောင်မှုအမှတ်အသား) နှင့်ဆက်စပ်မှုရှိမရှိအကဲဖြတ်ရန် BMI> 40 kg / m2) နှင့်အဝလွန်မဟုတ်သောထိန်းချုပ်မှု ၁၂ ခုတွင်နှိုင်းယှဉ်ထားသည်။ ဒေသတွင်း ဦး နှောက်ဂလူးကို့စဇီဝြဖစ်စကိုအကဲဖြတ်ရန် PET ကို D11 receptor များကိုအကဲဖြတ်ရန် [2C] raclopride နှင့်အတူ [18F] FDG နှင့်အသုံးပြုခဲ့သည်။ အဝလွန်ဘာသာရပ်များအတွက် striatal D2 အဲဒီ receptor ရရှိမှုထိန်းချုပ်မှုထက်နိမ့်ကြီးနှင့်အပြုသဘော dorsolateral prefrontal, medial orbitofrontal, anterior cingulate gyrus နှင့် somatosensory cortices အတွက်ဇီဝြဖစ်နှင့်ဆက်နွယ်ခဲ့သည်။ ထိန်းချုပ်မှုများတွင် prefrontal ဇီဝြဖစ်နှင့်အတူဆက်စပ်မှုသိသာမဟုတ်ကြပေမယ့်အဝလွန်ဘာသာရပ်များရှိသူများနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်သိသိသာသာမဟုတ်ကြသောအရာ, အဝလွန်ခြင်းမှထူးခြားသောအဖြစ်အသင်းအဖွဲ့များသတ်မှတ်ရန်ခွင့်ပြုမထားဘူး။ striatal D2 receptors နှင့်အဝလွန်ဘာသာရပ်များအတွက် prefrontal ဇီဝြဖစ်အကြားအသင်းအဖွဲ့ striatal D2 receptors အတွက်ကျဆင်းမှု inhibitory ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အဓိက attribution အတွက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်သော striatal prefrontal လမ်းကြောင်း, သူတို့ရဲ့မော်ဂျူမှတဆင့် overeating အထောက်အကူပြုနိုင်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ striatal D2 receptors နှင့် somatosensory cortices (ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်ကိုလုပ်ဆောင်သောဒေသများ) တွင်ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုအကြားဆက်နွယ်မှုသည် dopamine သည်အစားအစာ၏အားဖြည့်ဂုဏ်သတ္တိများကိုထိန်းညှိပေးသောယန္တရားတစ်ခုဖြစ်သည်။
keywords: Orbitofrontal cortex, Cingulate gyrus, Dorsolateral prefrontal, Dopamine သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, Raclopride, PET
အဝလွန်ခြင်းနှင့်လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အတွင်းမြင်ကြဆက်စပ်ဇီဝဖြစ်စဉ်ရောဂါများအတွက်တိုးထိန်းချုပ်ထားသောမဟုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီ 21st ရာစု (Sturm, 2002) အတွက်နံပါတ်တစ်ကာကွယ်နိုင်သောပြည်သူ့ကျန်းမာရေးခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်လာစေခြင်းငှါစိုးရိမ်ပူပန်ကြီးပြင်းခဲ့သည်။ မျိုးစုံအချက်များအဝလွန်ခြင်း၌ဤမြင့်တက်အထောက်အကူပြုသော်လည်းအရေးပါတယ်လို့အစားအစာဖို့မတူကွဲပြားမှုတွေနဲ့လက်လှမ်းအတွက်တိုး (Wardle, 2007) လျှော့တွက်လို့မရနိုင်ပါ။ အစားအစာရရှိမှုနှင့်အမျိုးမျိုးကျော်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကို (Wardle, 2007 ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်) အစားအစာဆွဲဆောင်ဖို့လွယ်ကူပါတယ် access ကိုတိုးပွါးကတည်းက (Berthoud, 2007) ကစားရန်ဆန္ဒတားစီးဖို့မကြာခဏလိုအပ်လိုအပ်သည်။ အရာတစ်ဦးချင်းစီသည်ဤတုံ့ပြန်မှုတားစီးသူတို့သည် စား. မည်မျှထိန်းချုပ်ရန်သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်အတွက်ထူးခြားအတိုင်းအတာကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိစားနပ်ရိက္ခာပေါကြွယ်ဝပတ်ဝန်းကျင်မှာ (Berthoud, 2007) တွင် overeating ဘို့မိမိတို့အန္တရာယ် modulate ဖွယ်ရှိသည်။
ကျနော်တို့ကျန်းမာတစ်ဦးချင်းစီအတွက် striatum အတွက် D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုအမူအကျင့်ပုံစံများအစာစားခြင်း modulated ကြောင်းပြသခဲ့ (Volkow et al ။ , 2003) ။ အထူးသအနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခံစားမှုနှင့်ထိတွေ့သည့်အခါအစာစားရန်သဘောထားအဆိုး (အနိမ့်သည့် D2 စိတ်ခံစားမှုအလေးပေးလျှင်တစ်ဦးချင်းကိုစားလိမ့်မယ်လို့မြင့်ဖြစ်နိုင်ခြေ receptors) D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်။ ထို့အပြင်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောလေ့လာမှုမှာကျနော်တို့ morbidly အဝလွန်ဘာသာရပ်များ (BMI> 40) ပုံမှန် D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုထက်နိမ့်ခဲ့ရပြီး, ဤလျှော့ချသူတို့ရဲ့ BMI (ဝမ် et al ။ , 2001) အားအချိုးကျခဲ့ကြသည်။ ကြောင်းပြသ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်အနိမ့် D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုကျော်ဘို့အန္တရာယ်မှာတစ်ဦးချင်းသွင်းထားနိုင်ကြောင်း postulate ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဦးဆောင်ခဲ့သည်။ တကယ်တော့ဒီ D2 receptors (antipsychotic ဆေးဝါးများ) ပိတ်ဆို့ခြင်းအစားအစာစားသုံးမှုတိုးပွါးနှင့်အဝလွန်ခြင်းများအတွက်အန္တရာယ်ပေါ်ပေါက်ကြောင်း (Allison et al ။ , 1999) ဖေါ်ပြခြင်းတွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီသည်။ သို့သျောလညျးအနိမ့် D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုကျော်၏အန္တရာယ်ကိုတိုးပွားစေရာအားဖြင့်ယန္တယားညံ့ဖျင်းနားလည်သဘောပေါက်ထားပါသည်။
မကြာသေးမီကကကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုအတွက် D2 အဲဒီ receptor ဗီဇအတွက် polymorphic inhibitory ထိန်းချုပ်မှု (Klein et al ။ , 2007) ၏အပြုအမူအစီအမံနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်ပြသခဲ့သည် အထူးသနိမ့် D2 စကားရပ်နှင့်ဆက်စပ်သောမျိုးဗီဇမူကွဲနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီပိုမိုမြင့်မား D2 အဲဒီ receptor စကားရပ်နှင့်ဆက်စပ်ဗီဇမူကွဲနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်အတူလျော့နည်း inhibitory ထိန်းချုပ်မှုရှိခဲ့နှင့်ဤအမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှု cingulate gyrus (CG) နှင့် dorsolateral prefrontal ၏ activation အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည် inhibitory control (Dalley et al ။ , 2004) ၏အမျိုးမျိုးသောအစိတ်အပိုင်းများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသော ဦး နှောက်ဒေသများဖြစ်သော cortex (DLPFC) ။ ဤသည်က D2 receptor ရရှိနိုင်မှုနည်းပါးသောဘာသာရပ်များတွင်အဝလွန်ခြင်းအတွက်ပိုမိုမြင့်မားသောအန္တရာယ်ကိုလည်းမသင့်လျော်သောအမူအကျင့်ဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုသဘောထားများကိုတားဆီးရာတွင်ပါ ၀ င်ကြောင်းပြသခဲ့သည့် DLPFC နှင့် medial prefrontal ဒေသများ၏ DA ၏စည်းမျဉ်းများကြောင့်မောင်းနှင်နိုင်သည်ဟူသောဖြစ်နိုင်ခြေကိုပြန်လည်စဉ်းစားစေသည်။ , 1985; Le Doux, 1987; Goldstein နှင့် Volkow, 2002) ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယခင်က D2 receptors (Wang et al ။ , 2001) နှင့်အဝလွန်ခြင်းအတွက် ဦး နှောက်ဂလူးကို့စဇီဝြဖစ် (Wang et al ။ , 2002) နှင့်အချက်အလက်များ၏အကဲဖြတ်ရန်လေ့လာမှုများ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်စုဆောင်းခဲ့သောဘာသာရပ်များအနေဖြင့်အချက်အလက်အပေါ်အလယ်တန်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖျော်ဖြေ အသက်အရွယ်ကိုက်ညီထိန်းချုပ်မှု။ ကျွန်ုပ်တို့၏အယူအဆမှာအဝလွန်သောဘာသာရပ်များရှိ D2 receptor ရရှိနိုင်မှုသည် prefrontal ဒေသများရှိလှုပ်ရှားမှုများကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်ဟုဆိုသည်။
ဒီလေ့လာမှုအဘို့အ morbidly အဝလွန်ဘာသာရပ်များနှင့် Non-အဝလွန်ဘာသာရပ်များ DA D11 receptors (Volkow et al ။ , 2a) ကိုတိုင်းနှင့် FDG ဦးနှောက်ကိုတိုင်းတာရန် [1993F] နှင့်အတူဖို့ raclopride [18C] နှင့် တွဲဖက်. Positron ထုတ်လွှတ်မှု Tomography (PET) နဲ့အကဲဖြတ်ခဲ့ ဂလူးကို့စဇီဝြဖစ် (ဝမ် et al ။ , 1992) ။ ကျနော်တို့ DA D2 receptors prefrontal ဒေသများ (DLPFC, CG နှင့် orbitofrontal cortex) တွင်ဇီဝြဖစ်နှင့်ဆက်နွယ်လိမ့်မယ်လို့တွေးဆ။
အလွန်အမင်းအဝလွန်သူ (၁၀ ဦး) (၅ ဦး နှင့်အမျိုးသမီး ၅ ဦး၊ ၃၅.၉ မှ ၁၀ နှစ်အရွယ်)၊ ကိုယ်ခန္ဓာထုထည် (BMI: ကီလိုဂရမ်အလေးချိန်သည်မီတာအမြင့်၏နှစ်ထပ်ကိန်းဖြင့်စားခြင်း) ဖြင့် ၅၁ ± ၅ ကီလိုဂရမ် / m5 ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ကြော်ငြာကိုတုံ့ပြန်တဲ့သူအဝလွန်ဘာသာရပ်များ၏။ အဝလွန်ခြင်းမရှိသည့်ဘာသာရပ် ၁၂ ခု (အမျိုးသမီး ၆ ဦး နှင့်အမျိုးသား ၆ ဦး၊ အသက် ၃၃.၂ - ၈ နှစ်အရွယ်)၊ BMI ၏ ၂၅ ± ၃ ကီလိုဂရမ် / m5 နှင့်နှိုင်းယှဉ်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများကိုအသေးစိတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသမိုင်း, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အာရုံကြောစာမေးပွဲ, EKG, ပုံမှန်စမ်းသပ်သွေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးဝါးများအတွက်ဆီးအဆိပ်အတောက်နှင့်အတူသူတို့ပါဝင်မှုနှင့်ဖယ်သတ်မှတ်ချက်ပြည့်စုံစေရန်သေချာခဲ့သည်။ ပါ ၀ င်မှုစံနှုန်းများမှာ - ၁) အသိပေးအကြောင်းကြားခွင့်နှင့်နားလည်ခွင့်ရှိခြင်း၊ 35.9) အဝလွန်ဘာသာရပ်များအတွက် BMI> 10 kg / m51 နှင့်နှိုင်းယှဉ်မှုဘာသာရပ်များအတွက် BMI <5 kg / m2 နှင့် 6) 6-33.2 နှစ်အရွယ်။ ဖယ်ထုတ်ခြင်းစံနှုန်းများမှာ (၁) လက်ရှိသို့မဟုတ်အတိတ်စိတ်ရောဂါနှင့် / သို့မဟုတ်အာရုံကြောဆိုင်ရာရောဂါ၊ (၂) မိနစ် ၃၀ ထက်ကျော်လွန်သောသတိရှိခြင်းနှင့် (၂) ဦး နှောက်စိတ်ဒဏ်ရာ၊ (၃) သွေးတိုးရောဂါ၊ ဆီးချိုရောဂါနှင့် ဦး နှောက်လုပ်ဆောင်မှုကိုပြောင်းလဲနိုင်သောကျန်းမာရေးအခြေအနေများ၊ (၄) အသုံးပြုခြင်း လွန်ခဲ့သော (၆) လအတွင်း anorexic ဆေးများသို့မဟုတ်ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေမည့်ခွဲစိတ်ကုသမှုများ၊ (၅) လွန်ခဲ့သော ၄ ပတ်အတွင်း၊ (၅) ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းအပါအ ၀ င်အရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအတိတ် (သို့) အတိတ်သမိုင်းကြောင်းများ။ စကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုမတိုင်မီတစ်ပတ်အလိုတွင်ဆေးဝါးနှင့်အာဟာရဖြည့်စွက်ဆေးများကိုမသောက်ရန်ဘာသာရပ်များကိုညွှန်ကြားခဲ့သည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုမရှိခြင်းကိုသေချာစေရန်ဆီးကိုကြိုတင်စစ်ဆေးပြီးစစ်ဆေးမှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Brookhaven အမျိုးသားဓာတ်ခွဲခန်းရှိ Institutional Review Board မှအတည်ပြုသည့်အတိုင်းလက်မှတ်ရေးထိုးထားသောအသိပေးသဘောတူညီချက်များကိုပါဝင်မှုမတိုင်မှီကရရှိခဲ့သည်။ ပေပုံရိပ်
PET Scan ဖတ် [931C] raclopride နှင့်အတူ tomograph (resolution ကို6×6× 6.5 မီလီမီတာ FWHM, 15 ချပ်) (။ ကွန်ပျူတာနည်းပညာများ, ဆွဲသွင်းပါဝင်, နို့, Tenn) တစ်ဦး CTI-11 နှင့်အတူဖျော်ဖြေခြင်းနှင့် [18F] FDG ခဲ့ကြသည်။ positioning ကို, သွေးလွှတ်ကြောနှင့်သွေးပြန်ကြော catheterization, radiotracer နှင့်ဂီယာနှင့်ထုတ်လွှတ် Scan ဖတ်၏အရေအတွက်အဘို့အလုပျထုံးလုပျနညျးအပေါ်အသေးစိတ် [11C] raclopride (Volkow et al ။ , 1993a) အတွက်ထုတ်ဝေခဲ့ကြနှင့် FDG (ဝမ် et al ။ , 18) [1992F] များအတွက် ။ အတိုချုပ် [11C] raclopride အဘို့, ပြောင်းလဲနေသော Scan ဖတ်ချက်ချင်း4မိ၏တစ်ဦးစုစုပေါင်း 10-0.25 MCI (တိကျတဲ့လှုပ်ရှားမှု> ဆေးထိုး၏အချိန်တွင် 60 Ci / μmol) ၏ဃဆေးထိုးပြီးနောက်စတင်ခဲ့ခဲ့ကြသည်။ FDG [18F] အဘို့, တဦးတည်းထုတ်လွှတ်စကင် (20 မိ) [35F] FDG ၏ 4-6 MCI တစ်ခုဃဆေးထိုးပြီးနောက် 18 မိခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ အဆိုပါ Scan ဖတ်ထိုနေ့ရက်တွင်ပြုမိကြသည် ဟူ. ၎င်း, အဆိုပါ [11C] raclopride စကင်ကိုပထမဦးဆုံးအပြုလေ၏နှင့် 18C ၏ယိုယွင်း (ဝက်ဘဝ2မိ) အတွက်ခွင့်ပြု [11C] raclopride ပြီးနောက် 11 ဇထိုးသွင်းခဲ့သည့် FDG [20F] ခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည်။ လေ့လာမှုအတွင်းမှာတော့ဘာသာရပ်များပွင့်လင်းသူတို့၏မျက်စိနှင့်အတူပေကင်မရာထဲမှာမုသာစကားကိုစောင့်ရှောက်ကြသည် ဟူ. ၎င်း, အခန်းထဲမှာမွဲမွံခွငျး lit ခံခဲ့ရခြင်းနှင့်ဆူညံသံနိမ့်ဆုံးမှာသိုထားခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဦးကသူနာပြုဘာသာရပ်လေ့လာမှုကာလအတွင်းအိပ်ပျော်မပြုခဲ့ကြောင်းသေချာစေရန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်လျှောက်လုံးဘာသာရပ်များနှင့်အတူကျန်ရစ်၏။
အဆိုပါ [11C] raclopride ပုံရိပ်တွေအတွက်အကျိုးစီးပွား (Roi) ၏နေရာများ striatum (caudate နှင့် putamen) နှင့် cerebellum များအတွက်ရရှိသောခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါရွယ်အစပိုင်းတွင် (raclopride [10C] ကို 60-11 မိမှလှုပ်ရှားမှု) တစ်ဦးပျမ်းမျှ scan ကအပေါ်ကိုရှေးခယျြခဲ့သညျ, ပြီးတော့ (Volkow et al ။ , 1993a) ယခင်ကဖော်ပြခဲ့သကဲ့သို့ပြောင်းလဲနေသော Scan ဖတ်မှ projected ခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦး Reversible လုပ်သည့်စနစ်တစ်ခုသော graphical ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ technique ကို (Logan ကွက်) (Logan et al သုံးပြီး [11C] striatum အတွက် raclopride နှင့် cerebellum နှင့်ပလာစမာထဲမှာမပြောင်းလဲ tracer များအတွက်လှုပ်ရှားမှုခါးဆစ်ဖြန့်ဖြူး volumes ကို (DV) တွက်ချက်ရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည့်အချိန်များအတွက်အချိန်လှုပ်ရှားမှု curves ။ , 1990) ။ အဆိုပါ cerebellum အတွက်မှ striatum အတွက် DV များ၏အချိုးအဖြစ်ရရှိသော parameter သည် Bmax / KD, (DVstriatum / DVcerebellum) အနုတ် 1, DA D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုတစ်မော်ဒယ် parameter သည်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဤသည် parameter သည်ဦးနှောက်သွေးစီးဆင်းမှု (Logan et al ။ , 1994) တွင်အပြောင်းအလဲများမှအာရုံမခံစားနိုင်သောဖြစ်ပါတယ်။
D2 receptor ရရှိနိုင်မှုနှင့် ဦး နှောက်ဂလူးကို့စဇီဝြဖစ်အကြားဆက်စပ်မှုအကဲဖြတ်ရန်ကျနော်တို့စာရင်းအင်း Parametric မြေပုံ (SPM) ကိုအသုံးပြု။ ဆက်စပ်မှုတွက်ချက် (Friston et al ။ , 1995) ။ SPM ရလဒ်များကိုလွတ်လပ်စွာဆွဲယူသောအကျိုးစီးပွားဒေသများ (ROI) ဖြင့်အတည်ပြုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာဒေသများသည် SPM မှရရှိသောကိုသြဒီနိတ်များမှလမ်းညွှန်မထားသောပုံစံတစ်ခုကို အသုံးပြု၍ ရရှိသည်။ SPM ကိုဆန်းစစ်ခြင်းအတွက်ဇီဝဖြစ်စဉ်အတိုင်းအတာ၏ပုံရိပ်များကို SPM 99 package တွင်ပေးထားသော template ကို အသုံးပြု၍ နေရာဒေသအလိုက်ပုံမှန်ပုံမှန်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ၁၆ မီလီမီတာ isotropic Gaussian kernel နှင့်ချောမွေ့သည်။ ဆက်စပ်မှုများအတွက်အရေးပါမှုကို P <16 (မမှန်ကန်သော၊ ၁၀၀ voxels) တွင်သတ်မှတ်ထားပြီးစာရင်းအင်းမြေပုံများကို MRI ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပုံတွင်ဖော်ပြထားသည်။ ROI ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယခင်ကထုတ်ဝေခဲ့သော template ကို အသုံးပြု၍ ဒေသများကိုထုတ်ယူခဲ့သည် (Wang et al ။ , 0.005) ။ ဤပုံစံတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် ROI ကို medial နှင့် lateral orbitofrontal cortex (OFC)၊ anterior cingulate gyrus (CG) နှင့် dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC) တို့အတွက်ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး DAI D100 receptor များနှင့်ဆက်သွယ်မှု“apriori”၊ ROIs များဖြစ်ကြသည့် putamen များသည် Striatal D1992 receptors များကိုတိုင်းတာခဲ့ကြသည်။ parietal (somatosensory cortex နှင့် angular gyrus)၊ temporal (သာလွန်။ ယုတ်ညံ့သည့်ယာယီ gyri နှင့် hippocampus) နှင့် occipital cortices, thalamus နှင့် cerebellum တို့ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ကြားနေ ROIs ။ Pearson ထုတ်ကုန်ယခုအချိန်တွင်ဆက်စပ်မှုဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း striatum အတွက်ဒေသဆိုင်ရာဇီဝဖြစ်စဉ်အစီအမံအတွက် D2 အဲဒီ receptor ရရှိမှုအကြားဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ ROI ထံမှ D2 receptors နှင့်ဒေသတွင်းဇီဝြဖစ်အကြားဆက်စပ်မှုများအတွက်သိသာထင်ရှားသောအဆင့်ကို P <2 နှင့် P <2 ၏တန်ဖိုးများကိုခေတ်ရေစီးကြောင်းအဖြစ်အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့သည်။ အုပ်စုများအကြားဆက်စပ်မှုအတွက်ကွာခြားချက်များဟာ Regression များအတွက်တိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုခြုံငုံစမ်းသပ်သုံးပြီးစမ်းသပ်ပြီးနှင့်အရေးပါမှုကို P <0.01 မှာသတ်မှတ်ထားခဲ့သည်။
striatal D2 receptor ရရှိနိုင်မှု (Bmax / Kd) ၏တိုင်းတာမှုများသည်အဝလွန်ခြင်းမရှိသောထိန်းချုပ်မှုများထက်သိသိသာသာနိမ့်ကျသည် (၂.၇၂ - ၀.၅ နှင့် ၃.၁၄ - ၀.၄၀ နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၃.၁၂ - ၀.၄၀၊ ကျောင်းသား t test = 2.72, P <0.5) ။ D3.14 receptor ရရှိနိုင်မှုနှင့်ဒေသဆိုင်ရာ ဦး နှောက်ဂလူးကို့စဇီဝြဖစ်ပျက်မှုအကြားဆက်စပ်မှုကိုအကဲဖြတ်ရန်အဝလွန်ဘာသာရပ်များအပေါ်ပြုလုပ်သော SPM ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုက (၁) ဘယ်နှင့်ညာ prefrontal (BA 0.40)၊ CG (BA-2.2) တွင်ဗဟိုပြုသောစပျစ်သီးပြွတ် ၄ ခုတွင်သိသိသာသာရှိကြောင်းပြသခဲ့သည် ဘယ်ဘက်နှစ် ဦး နှစ်ဖက် orbitofrontal cortices (BA 0.05) :( 2) လက်ဝဲနှင့်ညာဘက် prefrontal (BA 4); (1) ventral cingulate gyrus (BA 9) နှင့် medial orbitofrontal cortex (BA 32); နှင့် (45) လက်ျာ somatosensory cortex (BA 2, 10 နှင့် 3) (ပုံ။ 25, စားပွဲတင် 11) ။ ပုံ ၁ ။ SPM ဖြင့်ရရှိသော ဦး နှောက်မြေပုံများ Striatal D4 receptor ရရှိနိုင်မှုနှင့် ဦး နှောက်ဂလူးကို့စ်ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုတို့အကြားဆက်စပ်မှုရှိသည့်နေရာများကိုပြသခြင်း။ သိသာထင်ရှားတဲ့ P <1, မပြုပြင်မထားတဲ့, စပျစ်သီးပြွတ်အရွယ်အစား>2voxels ကိုက်ညီ။
SPM striatal D0.005 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုနှင့်ဂလူးကို့စဇီဝြဖစ်အကြားသိသိသာသာ (P <2) ဆက်စပ်မှုကိုဖော်ပြရှိရာ ဦး နှောက်ဒေသများ striatum အတွက် DA D2 အဲဒီ receptor ရရှိမှုနှင့် ROI ကိုအသုံးပြု။ ထုတ်ယူဇီဝဖြစ်စဉ်အစီအမံများအကြားဆက်စပ်မှုများအတွက်လွတ်လပ်သောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအဆိုပါ SPM တွေ့ရှိချက်။ ဒီခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဆက်စပ်မှုလက်ဝဲနှင့်လက်ျာ DLPFC (BA9နှင့် 10 နှင့်သက်ဆိုင်သော), anterior CG (BA 32 နှင့် 25 နှင့်ကိုက်ညီ) နှင့် medial orbitofrontal cortex (medial BA 11) အတွက်သိသာထင်ရှားသောဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ဒါဟာအစလက်ျာ somatosensory cortex (postcentral parietal cortex) (ဇယား 2, ပုံ။ 2) နှင့်အတူသိသိသာသာဆက်စပ်မှုအတည်ပြု။ ဇယား ၂ Striatal DA D2 receptor ရရှိနိုင်မှု (Bmax / Kd) နှင့်အဝလွန်ဘာသာရပ်များနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများတွင်ဒေသတွင်း ဦး နှောက်ဇီဝြဖစ်မှုများအကြားဆက်စပ်မှုများအတွက်ဆက်စပ်မှုကိန်းများ (r တန်ဖိုးများ) နှင့်အရေးပါမှုအဆင့်များ (P တန်ဖိုးများ) ပုံ။ ၂ DA D2 အကြားဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းမှုဆင်ခြေလျှောများ prefrontal ဒေသများနှင့် somatosensory cortex အတွက်အဲဒီ receptor ရရှိမှု (Bmax / Kd) နှင့်ဒေသဆိုင်ရာဂလူးကို့စဇီဝြဖစ် (μmol /2g / min) ။ ဤအဆက်စပ်မှုများအတွက်တန်ဖိုးများကိုဇယား ၂ တွင်ပြထားသည်။ ထို့အပြင် ROI ကို အသုံးပြု၍ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်ဘယ်ဘက် somatosensory cortex နှင့်သိသာသောဆက်စပ်မှုကိုပြသခဲ့သည်။ မှန်သောထောင့် gyrus နှင့်လက်ျာ caudate (လမ်းကြောင်း 2)၊ ပုံ 100 ။ အခြား cortical (occipital, ယာယီနှင့်နှစ် ဦး နှစ်ဖက် orbitofrontal cortex), subcortical (thalamus, striatum) နှင့် cerebellar ဒေသများနှင့်အတူဆက်စပ်မှုသိသိသာသာကြဘူး။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်, ထိန်းချုပ်မှုအတွက် ROI ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုနှင့်ဇီဝြဖစ်အကြားတစ်ခုတည်းသောသိသာဆက်စပ်မှုလက်ဝဲ postcentral gyrus ခဲ့ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ညာဘက်နှစ် ဦး နှစ်ဖက် orbitofrontal cortex နှင့်ညာဘက် angular gyrus အတွက်ဆက်စပ်မှုတစ်ခုလမ်းကြောင်းသစ်ရှိခဲ့သည်။
ဤတွင်ကျနော်တို့အတွက် morbidly အဝလွန်ဘာသာရပ်များ DA D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု prefrontal ဒေသများ (DLPFC, medial orbitofrontal cortex နဲ့ anterior CG) တွင်ဇီဝဖြစ်စဉ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့ကွောငျးဖျောပွပါ။ ဤရွေ့ကားဒေသများ (1999, Tataranni et al ။ , 2003, Tataranni နှင့် DelParigi) အားလုံးအစားအစာစားသုံးမှုကိုထိန်းညှိခြင်းနှင့်အဝလွန်တစ်ဦးချင်းစီ၏ hyperphagia ်ပတ်သက်နေရှိသည်။ ငါတို့သည်လည်းအဝလွန်နှင့် Non-အဝလွန်ထိန်းချုပ်မှု (သာလက်ဝဲဒေသများ) တွင်နှစ်ဦးစလုံးသိသိသာသာခဲ့ကြောင်း somatosensory cortex အတွက်ဇီဝြဖစ်နှင့်အတူတစ်ဦးသိသိသာသာဆက်စပ် (postcentral cortical) ပြသပါ။ ကျနော်တို့က somatosensory cortex နှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့တစ်ခုမမျှော်လင့်ဘဲတွေ့ရှိချက်ခဲ့ prefrontal ဒေသများနှင့်အတူဆက်စပ်တွေးဆခဲ့သွားရမည်။
D2 receptors နှင့် prefrontal ဇီဝြဖစ်အကြားအစည်းအရုံး
D2 အကြားသိသာထင်ရှားသောအသင်းအဖွဲ့ prefrontal ဒေသများတွင်ရရှိနိုင်မှုနှင့်ဇီဝြဖစ် receptors (prefrontal cortical ဒေသများတွင်ဇီဝြဖစ်လျော့နည်းသွားကျနော်တို့ D2 receptors အတွက်လျှော့ချနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြကြောင်းပြသတော်မူသောမူးယစ်ဆေးဝါး-စွဲဘာသာရပ်များ (ကိုကင်း, စိတ်ကြွဆေးနှင့်အရက်) တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုတင်တွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီဖြစ်ပါသည် Volkow et al, 1993b; ။ Volkow et al, 2001; ။ Volkow et al, 2007) ။ ။ အလားတူပဲအရက်အဘို့အမြင့်မားတဲ့မိသားစုအန္တရာယ်မှာတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ကျနော်တို့ D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုနှင့် prefrontal ဇီဝြဖစ်အကြားတစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့မှတ်တမ်းတင် (Volkow et al ။ , 2006) ။ အဝလွန်ခြင်းနှင့်စွဲစွဲလမ်းမှုနှစ်မျိုးလုံးသည်၎င်း၏အနှုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုများကိုသတိပြုမိသော်လည်းအပြုအမူကိုထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းမတတ်စွမ်းနိုင်ကြသည်။ prefrontal ဒေသများ inhibitory ထိန်းချုပ်မှု (Dalley et al ။ , 2004) ၏အမျိုးမျိုးသောအစိတ်အပိုင်းများအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရနေကြသည်အဖြစ်ကျနော်တို့အဝလွန်ဘာသာရပ်များ၏ striatum (Wang et al ။ , 2) နှင့်အဝလွန်ခြင်း၏ကြွက်မော်ဒယ်များအတွက်အနိမ့် D2001 အဲဒီ receptor ရရှိမှု။ et al, 1992; ။ Huang က et al, 2006; ။ Thanos et al, 2008) inhibitory ထိန်းချုပ်မှုတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်သော prefrontal ဒေသများ၏ DA ရဲ့မော်ဂျူကနေတဆင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဝလွန်ခြင်းကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။
အဆိုပါတွေ့ရှိချက်ကိုလည်းအဝလွန်များအတွက်အန္တရာယ်မှပြောပြတယ်အဖြစ် prefrontal ဒေသ dopaminergic စည်းမျဉ်း D2 receptors မှတဆင့်တွေးတောဆင်ခြင်စေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဤသည်အထူးသအဝလွန်ခြင်းမှအားနည်းချက်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းတဦးတည်း (Fang et al သကဲ့သို့, D2 receptor မျိုးရိုးဗီဇ (TAQ-် IA polymorphic) ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသောမျိုးဗီဇလေ့လာမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်တယ်, 2005; ။ Pohjalainen et al, 1998; ။ Bowirrat နှင့် Oscar- Berman, 2005) ။ ထို့အပြင်, ဦးနှောက်အတွက်အနိမ့် D2 အဲဒီ receptor အဆင့်ဆင့်ဖြစ်ပေါ်ပုံရသော TAQ-် IA polymorphic, (striatum) (Ritchie နှင့် Noble, 2003; Pohjalainen et al, 1998; ။ ။ Jonsson et al, 1999) မကြာသေးမီကနှင့်ဆက်စပ်ခံရဖို့ရှာတွေ့ခဲ့သည် အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များနှင့် prefrontal ဒေသများ (Klein et al ။ , 2007) ၏ချို့ယွင်း activation နှင့်အတူဖြစ်ပေါ်ကြောင်းအပြုအမူတွေကိုတားစီးဖို့စွမ်းရည်လျော့နည်းသွားသည်။ အလားတူပင် preclinical လေ့လာမှုများအနိမ့် D2 အဲဒီ receptor အဆင့်ဆင့်နှင့်အတူတိရိစ္ဆာန်များမြင့်မားသော D2 အဲဒီ receptor အဆင့်ဆင့် (Dalley et al ။ , 2007) နှင့်အတူ၎င်းတို့၏ littermates ထက်ပိုမိုထကြွလွယ်သောဖြစ်ကြောင်းကိုပြသခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုကနေတွေ့ရှိချက် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုနှင့် Impulse နှင့်အတူ D2 receptors ၏အသင်းအဖွဲ့ prefrontal ဒေသများတွင်၎င်းတို့၏မော်ဂျူခွငျးအားဖွငျ့စိတျအပိုငျးအတွက်ကမကထပြုခဲ့ကြောင်းထပ်မံသက်သေအထောက်အထားသည်။ ဤအမှု၌ကြောင့် morphological လေ့လာမှုများအစီရင်ခံခဲ့ကြကြောင်းဦးနှောက်ကိုသတိပြုပါရန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါသည်တစ်ဦးချင်းစီအမှီနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာအဝလွန်ဘာသာရပ်များအတွက် prefrontal cortex အတွက်မီးခိုးရောင်ကိစ္စ volumes ကိုလျှော့ချ (Pannacciulli et al ။ , 2006) ။
ဒီဒေသမကြာသေးမီကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလုပ်ဆောင်ချက်၏ endogenous တားစီး (Brass နှင့် Haggard, 2) တွင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရကတည်းက D2007 receptors နှင့် DLPFC အကြားဆက်စပ်မှုအထူးသဖြင့်စိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုသည်လူတစ် ဦး ၏ရည်ရွယ်ချက်ကို ၂၀၀၅ မှ ၅၀၀ မိုင် (Libet et al ။ , 200) မှသတိပြုမိခြင်းထက် ဦး နှောက်အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုသည်အချို့ကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလုပ်ဆောင်မှုများနောက်ကွယ်မှ“ လွတ်လပ်စွာလုပ်ပိုင်ခွင့်” ဟူသောအယူအဆကိုသံသယဖြစ်စေပြီးထိန်းချုပ်မှုသည်စွမ်းရည်ကိုထင်ဟပ်စေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့မလိုအပ်သောလုပ်ရပ်များကိုတားစီးပါလိမ့်မည်။ အမှန်စင်စစ်ဤဗီတိုအာဏာပါဝါသို့မဟုတ်လွတ်လပ်စွာလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အား“ လွတ်လပ်စွာလုပ်ပိုင်ခွင့်” ကိုအသုံးပြုသည့်နည်းလမ်းဖြစ်နိုင်သည်ဟုအကြံပြုခဲ့သည် (Mirabella, 500) ။ အဝလွန်ခြင်းကိစ္စတွင်အစားအစာသို့မဟုတ်အစားအစာကိုအခြေခံသောအချက်များနှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်အစားအစာဝယ်ယူခြင်းနှင့်စားခြင်းတွင်ပါဝင်သောအာရုံခံဆဲလ်စနစ်များကိုစိတ်မ ၀ င်စားခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်မှုသည်ဤရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလုပ်ဆောင်မှုများကိုတားဆီးနိုင်သည့်စွမ်းရည်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ အစားအစာ။ တစ်ခုမှာထိုကဲ့သို့သောကျနော်တို့အလေးချိန်ရရှိချင်ကြပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့ငတ်မွတ်နေကြသည်မဟုတ်အခါ, ကျော်ဖြစ်ပေါ်နိုင်မစားအဖြစ်အပျက်သဘောဆောင်သောရလဒ်များအတွက်ရလဒ်ကြောင့်အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များကိုတားစီးနိုင်ပါတယ်သော DLPFC ၏ပုံကိုမလျော်ကန်သော function ကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ပိန်တစ်ဦးချင်းစီအတွက်ထက်အဝလွန်ဘာသာရပ်များအတွက်အစာစားပြီးနောက် DLPFC ၏ activation အတွက် သာ. ကြီးလျှောက်လျော့နည်းဖေါ်ပြခြင်း imaging တွေ့ရှိချက်ကဒီအယူအဆကိုထောကျပံ့ (Le et al ။ , 2006) ။
D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုအကြားနှင့် orbitofrontal cortex (OFC) medial နှင့် CG anterior အဆိုပါအသင်းအဖွဲ့စာစားချင်စိတ်ကိုစည်းမျဉ်း (Pliquett et al ။ , 2006) ၌မိမိတို့ပါဝင်ပတ်သက်မှုနှင့်ကိုက်ညီသည်။ အဆိုပါ OFC နှင့် CG ၏ dopaminergic activation ကျော်များအတွက်အန္တရာယ်တိုးမြှင့်ပေးနိုင်နှောင့်အယှက်ပေးသောအားဖြင့်တဦးတည်းအဆိုပြုနိုင်သောနည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်။
(; 2007, Grabenhorst et al; 2007, Tremblay နှင့် Schultz ။ Rolls နှင့် McCabe, 1999) နှင့်အရှင်အစားအစာ-သွေးဆောင် DA ဆွဖို့အလယ်တန်းက၎င်း၏ activation တစ်ခုပြင်းထန်သောလှုံ့ဆျောမှုဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်းအဆိုပါ medial OFC အစားအစာ၏တန်ဖိုးအပါအဝင် salience ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်နေပါတယ် ကတားစီးဖို့တစ် concomitant နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းနှင့်အတူစားနပ်ရိက္ခာလောင်ရန်။ အစားအစာ၏တန်ဖိုးမွတ်မပြေသဖြင့် devalued နှင့်ရှင်းပြနိုင်သည့်အခါထိုမှတပါး, သင်ယူအသင်းအဖွဲ့များ၏ပယ်ဖျက်ခံရထဲမှာချို့ယွင်းအတွက် OFC ရလဒ်များ၏လှုပ်ရှားမှုများတွင်နှောင့်အယှက်တစ်ခုစစ်ကူ devalued သောအခါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ (Gallagher et al ။ , 1999) ဒီဆက်လက်စားသောက်မှုနိုင် အဘယျကွောငျ့ OFC ၏ပျက်စီးမှုကိုကျော် (နို့ဓမ်း et al ။ , 1963, ဂျွန်ဆင်, 1971) အပါအဝင် compulsive အပြုအမူတွေနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ထို့အပြင် OFC (။ Schoenbaum et al ။ , 1998, Hugdahl et al 1995) နှိုးဆွ-အားဖြည့်အသင်းအဖွဲ့များနှင့်အေးစက်သင်ယူခြင်းအတွက်ပါဝင်ထို့ကြောင့် conditional-cue တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင် (Weingarten, 1983) နို့တိုက်ကျွေးမှုရူးနှမ်း။ အစားအစာ-သွေးဆောင် conditional တုံ့ပြန်မှုကအလွန်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်မသက်ဆိုင်ဘဲမူလငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုအချက်ပြမှုများ (အော့ဒန်ဝင်းနှင့် Wardle, 1990) ၏ overeating အထောက်အကူပြုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကသက်ဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ dorsal CG (BA 32) လှုပ်ရှားမှုစောင့်ကြည့်ရေးတောင်းဆိုကြောင်းအခြေအနေများတွင် inhibitory ထိန်းချုပ်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသည်ထိုသို့ (Gehring နဲ့ Knight 2000) အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သော DLPFC ၏နဲ့အတူသူ့ရဲ့နှောင့်အယှက်လှုပ်ရှားမှုနောက်ထပ်အဝလွန်တစ်ဦးချင်းစီ၏စွမ်းရည်အယှက်ဖွယ်ရှိသည် overeat ဖို့စိတ်သဘောထားတားစီးဖို့။ အဆိုပါ ventral CG (BA 25) (2000 ။ Elliott သည် et al) လှုံ့ဆော်မှု (ကြိုးအဖြစ်ဆန္ဒရှိ) အဓိကဖို့စိတ်ခံစားမှုတုံ့ပြန်မှုဖြန်ဖြေအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသည်ပုံရိပ်လေ့လာမှုများ Breiter et (BA 25 ကသဘာဝနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုလာဘ်များက activated ကြောင်းပြသကြ အယ်လ်, 1997, Francis က et al, 1999; ။ ။ Bern et al, 2001) ။ ။ ထို့ကြောင့် D2 receptors နှင့်ကျွန်တော်ယခင်ကကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုအစီရင်ခံအနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခံစားမှု (Volkow et al ။ , 2003) ထိတွေ့သောအခါအစာကိုစားရန်စိတ်သဘောထားအကြားအနုတ်လက္ခဏာအသင်းအဖွဲ့ BA ဘွဲ့ 25 ၏မော်ဂျူကကမကထပြုခဲ့နိုငျသညျ။
အစားအစာများ၏အားဖြည့်ခြင်းနှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးသက်ရောက်မှု်ပတ်သက်နေဒေသများဖြစ်သော prefrontal ဒေသများနှင့် D2 receptors အတွက်ဇီဝဖြစ်စဉ်လှုပ်ရှားမှုအကြားအသင်းအဖွဲ့ ventral နှင့် dorsal striatum (Ray နှင့်စျေး, 1993) ကနေ prefrontal cortex ဖို့ပရိုဂျက်ကိုထင်ဟပ်နိုင်ခြင်း, (Koob နှင့် Bloom, 1988) နှင့် / သို့မဟုတ် (Oades နှင့် Halliday, 1987) striatum ဖို့အဓိက DA စီမံချက်များနေသော ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) နှင့် substantia nigra (SN), ကနေ။ အသင်း DA striatal လှုပ်ရှားမှု၏ prefrontal စည်းမျဉ်း (Murase et al ။ , 1993) ကိုထင်ဟပ်နိုင်အောင်သို့သော် prefrontal cortex ကိုလည်း striatum ဖို့ပရိုဂျက်ပေးပို့သည်။
Non-အဝလွန်ထိန်းချုပ်မှုခုနှစ်တွင် D2 အဲဒီ receptor နှင့် prefrontal ဇီဝြဖစ်အကြားဆက်စပ်မှုသိသာဘူး။ ကြိုတင်တွေ့ရှိချက်ထဲမှာအကြှနျုပျတို့အနိမ့် D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုနှင့်အတူစွဲဘာသာရပ်များအတွက် D2 အဲဒီ receptor နှင့် prefrontal ဇီဝြဖစ်အကြားသိသာထင်ရှားသောဆက်စပ်မှုကိုပြသသော်လည်းမထိန်းချုပ်မှုအတွက်ခဲ့သော (Volkow et al ။ , 2007)သို့သော်အဝလွန်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုများအကြားဆက်စပ်မှု၏နှိုင်းယှဉ်ပါက D2 receptors နှင့် prefrontal ဇီဝြဖစ်အကြားအသင်းအဖွဲ့အဝလွန်ခြင်းမှထူးခြားသောကြောင်းမဖြစ်နိုင်ကြောင်းအကြံပြုသောသိသိသာသာမ (သို့မဟုတ်နှုန်း Volkow et al အဖြစ်စွဲဖို့။ , 2007) ။ ဒါဟာအဝလွန်တစ်ဦးချင်းစီ၌ထင်ရှားခိုင်မာဆက်စပ်မှုထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များ (Bmax / KD အကွာအဝေး 2-2.1) တွင်ထက်အဝလွန် (Bmax / KD အကွာအဝေး 3.7-2.7) တွင် striatal D3.8 အဲဒီ receptor အစီအမံများပိုမိုလာအကွာအဝေးကိုထင်ဟပ်ကြောင်းကိုပိုပြီးဖွယ်ရှိသည်။
ဤအတွေ့ရှိချက်ပြန်ဆိုထဲမှာ raclopride သူ၏ binding D11 receptors မှ endogenous DA (Volkow et al ။ , 2) မှအထိခိုက်မခံတစ် radiotracer ဖြစ်ပါတယ် [1994C] ကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်နှင့်အရှင်အဝလွန်ဘာသာရပ်များအတွက် D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု၏လျှော့ချနိမ့်ရောင်ပြန်ဟပ်နိုင်လည်းအရေးကြီးပါတယ် DA လွှတ်ပေးရန်အတွက်အဲဒီ receptor အဆင့်ဆင့်သို့မဟုတ်တိုး။ အဝလွန်ခြင်း၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက် Preclinical လေ့လာမှုများ D2 receptors တွေရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက်လျှော့ချရေး (Thanos et al ။ , 2008), အဝလွန်ဘာသာရပ်များအတွက်လျှော့ချ D2 အဲဒီ receptor အဆင့်ဆင့်အတွက်လျှောက်လျော့နည်းရောင်ပြန်ဟပ်ကြောင်းအကြံပြုထားတဲ့မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြသည်။
D2R နှင့် somatosensory cortex အကြားဆက်စပ်မှု
ကျနော်တို့ "a priori" somatosensory cortex အတွက် D2 receptors နှင့်ဇီဝြဖစ်အကြားအသင်းအဖွဲ့တွေးဆဘူး။ တိုကျရိုကျတိုကျပှဲနှငျ့တိုကျရိုကျဒေသမြားနှငျ့နှိုငျးယှဉျထားသညျ့အခါ parietal cortex တွင် DA ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ လူသိများသောအနည်းငယ်သာရှိသည်။ subcortical ဒေသများထက်အများကြီးနိမ့်နေစဉ်လူ့ ဦး နှောက်ထဲမှာ parietal cortex အတွက် D2 receptors နှင့် D2 mRNA များ၏အာရုံစူးစိုက်မှုတိုကျရိုကျ cortex အစီရင်ခံတင်ပြနှင့်ညီမျှသည် (Suhara et al, 1999; ။ Mukherjee et al, 2002; Hurd et al ။ , ။ 2001) ။ အစားအစာစားသုံးမှုနှင့်အဝလွန်ခြင်းအတွက် somatosensory cortex ၏အခန်းကဏ္onကိုအပေါ်ကန့်သတ်စာပေလည်းမရှိ။ ပုံရိပ်လေ့လာမှုများအရအနိမ့်ကယ်လိုရီအစားအစာများ (Killgore et al ။ , 2003) နှင့်စိတ်ကျေနပ်မှု (Tataranni et al ။ , 1999) နှင့်အမြင်အာရုံပုံရိပ်များကိုထိတွေ့မှုနှင့်အတူပုံမှန်အလေးချိန်ဘာသာရပ်များအတွက် somatosensory cortex ၏ activation အစီရင်ခံနှင့်ငါတို့ပုံမှန်အခြေခံဇီဝြဖစ်ထက်ပိုမိုမြင့်မားပြသခဲ့သည် အဝလွန်ဘာသာရပ်များ (Wang et al ။ , 2002) တွင် somatosensory cortex ၌တည်၏။ ဒါ့အပြင်မကြာသေးမီကလေ့လာမှု leptin ၏ leptin ချို့တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အတူအဝလွန်တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်အစားအစာ -related လှုံ့ဆော်မှုကြည့်ရှုစဉ် parietal cortex အတွက်သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ပုံမှန်နှင့် parietal cortex အတွက် ဦး နှောက် activation လျှော့ချကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည် (Baicy et al ။ , 2007) ။ အဆိုပါ striatum နှင့် somatosensory cortex အကြားအလုပ်လုပ်ဆက်သွယ်မှုမကြာသေးမီက dorsal striatum (Postuma နှင့် Dagher, 126) ၏ somatosensory cortex ၏ Co- activation မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံရိပ်လေ့လာမှုများ, အပေါ် Meta-analysis သည်လေ့လာမှုအားဖြင့်မကြာသေးမီကလူ့ ဦး နှောက်အဘို့အအတည်ပြုခဲ့သည် ) ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုတွင်ဆက်နွယ်မှုများအရအသင်းအပင်း၏ညွှန်ကြားချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိနိုင်ပါ။ D2006 receptors နှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့ somatosensory cortex နှင့် / သို့မဟုတ် striatal D2 အဲဒီ receptor ရရှိမှုအပေါ် somatosensory cortex ၏ DA ရဲ့မော်ဂျူထင်ဟပ်လျှင်ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ဆုံးဖြတ်ရန်လို့မရပါဘူး။ အမှန်စင်စစ် somatosensory cortex striatal DA လွှတ်ပေးရန်အပါအဝင် ဦး နှောက် DA လှုပ်ရှားမှုသြဇာလွှမ်းမိုးမှုကြောင်းလုံလောက်သောသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ် (Huttunen et al, 2; ။ Rossini et al, 2003; ။ Chen က et al, 1995 ။ ) DA လူ့ ဦး နှောက်ထဲမှာ somatosensory cortex modulates ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားလည်းရှိပါတယ် (Kuo et al ။ , 2007) ။ DA stimulation သည်ကျန်းမာခြင်းကိုပြသပြီးအေးစက်စေခြင်းကိုထောက်ကူပေးသောကြောင့် (Zink et al ။ , 2007, Kelley, 2003), DA ၏အစားအစာအပေါ် somatosensory cortex ၏တုန့်ပြန်မှု၏အစားအစာနှင့်အစားအစာနှင့်ဆက်စပ်သောပတ် ၀ န်းကျင်အကြားဆက်စပ်မှုရှိသည့်ဆက်နွယ်မှုကိုဖွဲ့စည်းခြင်းတွင်အခန်းကဏ္ play မှပါလိမ့်မည်။ တွေကိုနှင့်အဝလွန်ခြင်းအတွက်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းအစားအစာများ၏တိုးမြှင့်အားဖြည့်တန်ဖိုးကို (Epstein et al ။ , 2004) ။
ဒီလေ့လာမှုများအတွက်တစ်ဦးကန့်အသတ်ကျနော်တို့ neuropsychological အစီအမံရယူမပြုခဲ့ခြင်းနှင့် prefrontal ဒေသများအတွက်လှုပ်ရှားမှုသည်ဤအဝလွန်ဘာသာရပ်များအတွက်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေး၏အမူအကျင့်အတိုင်းအတာနှင့်ဆက်စပ်လျှင်အရှင်ကျနော်တို့အကဲဖြတ်ရန်မနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဝလွန်ခြင်းအပေါ် neuropsychological လေ့လာမှုများကန့်သတ်ထားပါသည်နှင့်တွေ့ရှိချက်များကိုအဝလွန်ခြင်း၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပြဿနာများ (ဆိုလိုသည်မှာဆီးချိုရောဂါနှင့်သွေးတိုးရောဂါ) ကရှက်ကြောက်နေကြသည်သော်လည်း, အဝလွန်ဘာသာရပ်များအတွက် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုနှောင့်အယှက်စေခြင်းငှါသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်။ ပုံမှန်အလေးချိန်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာအထူးသ, အဝလွန်ဘာသာရပ်များချို့ယွင်း inhibitory ထိန်းချုပ်မှုနှင့် prefrontal ကမောက်ကမဖြစ်မှု (Pignatti et al ။ , 2006) နဲ့ကိုက်ညီမယ့်တွေ့ရှိချက်ဖြစ်သောလျော့နည်းအကျိုးရှိရွေးချယ်မှု, ပါစေ။ Impulse အတွက်နှောင့်အယှက်ကပါဝင်ပတ်သက်ရသောအာရုံကိုလိုငွေပြမှု hyperactivity ရောဂါ (ADHD), ထို့ပြင်နှုန်းထားများ, အဝလွန်တစ်ဦးချင်းစီ (Altfas, 2002) တွင်တိုးမြှင်နေကြသည်။ အလားတူပင် Impulse (Fassino et al ။ , 2003) အချို့သောလူဦးရေမြင့်မားနေသည်ဟု BMI နှင့်အတူဆက်နွယ်နေခဲ့ပြီးကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုအတွက် BMI လည်း Impulse ဖျန်ဖြေကြောင်းအလုပ်အမှုဆောင် function ကို၏တာဝန်များကိုအတွက်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည် (Gunstad et al ။ , 2007) ။
ဒါ့အပြင်ဤစာတမ်းတွင်ကျနော်တို့က prefrontal cortex inhibitory ထိန်းချုပ်မှုနှင့် Impulse အပေါ်ကျနော်တို့က prefrontal cortex ရာများစွာကိုသိမြင်မှုစစ်ဆင်ရေးတစ်ခုကျယ်ပြန့်နှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုရန်သောအခန်းကဏ္ဍအပေါ်အာရုံစိုက်နေချိန်တွင် (အဝလွန်ဘာသာရပ်များအတွက် Kuo က et al နှောင့်အယှက်မပေးနေကြသည်။ , 2006, Wolf က et al ။ , 2007) ။ ဒါဟာအဝလွန်ခြင်းကိုအထောက်အကူပြုသော prefrontal cortex ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာ striatal prefrontal လမ်းကြောင်းကနေတဆင့် DA မော်ဂျူမှအထိခိုက်မခံသောသူများဖြစ်ကြ၏ဖြစ်နိုင်သည် (Robbins, 2007; ။ Zgaljardic et al, 2006) ။
prefrontal လှုပ်ရှားမှု၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို dregreg မဟုတ်သလိုအလုပ်အမှုဆောင် function ကို၏ချို့ယွင်းသည်အဝလွန်ခြင်းအတွက်သတ်သတ်မှတ်မှတ်မဟုတ်ပါဘူး။ အမှန်မှာ prefrontal ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုနှင့်အလုပ်အမှုဆောင်၏ချို့ယွင်းမှုများတွင်ပုံမှန်မဟုတ်သောပုံမှန်မဟုတ်သောမူးယစ်ဆေးစွဲမှု၊ schizophrenia၊ ပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့် ADHD စသည့် dopaminergic ပါ ၀ င်မှုရှိသည့်ရောဂါများကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသည် (Volkow et al ။ , 1993b; Gur et al ။ , 2000; 2007); Robbins, 2006; Zgaljardic et al, XNUMX ။ ။
နောက်ထပ်ကန့်သတ်သည့်ပေ၏ကန့်သတ် Spatial resolution ကို [11C] raclopride နည်းလမ်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုထိုကဲ့သို့သော hypothalamus အဖြစ်အစားအစာဆက်စပ်အပြုအမူတွေကိုဖြန်ဖြေအတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်ကြောင်းသေးငယ်တဲ့ဦးနှောက်ဒေသများတွင် D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုကိုတိုင်းတာရန်ခွင့်ပြုမပြုခဲ့ကြောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆက်စပ်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်အသင်းအဖွဲ့များဆိုလိုဘူး, နောက်ထပ်လေ့လာမှုများအဝလွန်ဘာသာရပ်များအတွက် prefrontal function ကိုအတွက်နှောင့်အယှက် DA ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှု၏အကျိုးဆက်များကိုအကဲဖြတ်ဖို့လိုအပ်သည်။
ဒီလေ့လာမှုက striatum အတွက် D2 receptors အကြားအဝလွန်ဘာသာရပ်များအတွက်သိသာထင်ရှားသောအသင်းအဖွဲ့နှင့် DLPF, medial OFC နှင့် CG အတွက်လုပ်ဆောင်ချက်ကိုပြသ (inhibitory ထိန်းချုပ်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရဦးနှောက်ဒေသများ, salience ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုများနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ reactivity ကိုနှင့်၎င်းတို့၏ပြတ်တောက်ထကြွလွယ်သောနှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောအပြုအမူကိုဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်), အရာ ဒီအဝလွန်ခြင်းအတွက်အနိမ့် D2 receptors ကျော်နှင့်အဝလွန်ခြင်းမှအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်သည့်အားဖြင့်ယန္တယားများ၏တဦးတည်းဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ထို့အပြင်ငါတို့သည်လည်း (။ Epstein et al 2) အစားအစာများ၏အားဖြည့်ဂုဏ်သတ္တိများ modulate နိုင်ကြောင်း somatosensory cortex အတွက် D2007 receptors နှင့်ဇီဝြဖစ်အကြားသိသိသာသာအသင်းအဖွဲ့မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်တန်ရာထပ်မံစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဖြစ်သည်။
Paulaska၊ Colleen Shea၊ Youwen Xu၊ Pauline Carter, Karen Apelskog နှင့် Linda Thomas တို့ကိုသူတို့ပံ့ပိုးမှုများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဤသုတေသနကို NIH ၏ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာသုတေသနအစီအစဉ် (NIAAA) နှင့် DOE (DE-AC01-76CH00016) မှထောက်ပံ့ခဲ့သည်။
1 ။ et al Allison DB, ဆရာ JL ။ Antipsychotic-သွေးဆောင်ကိုယ်အလေးချိန်: တစ်ပြည့်စုံသုတေသနပေါင်းစပ်။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1999; 156: 1686-1696 ။ [PubMed]
2 ။ အဝလွန်ခြင်းကိုကုသရာတွင်လူကြီးများအကြားအာရုံကိုလိုငွေပြမှု / hyperactivity ရောဂါ Altfas ဂျေပျံ့နှံ့နေတဲ့။ BMC စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2002; 2:9။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
3 ။ et al Baicy K သည်, လန်ဒန် ED ။ Leptin အစားထိုးဗီဇ leptin-လစ်လပ်လူကြီးများအတွက်အစားအသောက်တွေကိုမှဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုပွောငျးလဲ။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ အမေရိကန်အေ 2007; 104: 18276-18279 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
4 ။ Bern GS, လူယာသည် SM, Pagnoni, G, ဂူ PR စနစ်။ ကြိုတင်ခန့်မှန်းဆုချမှလူ့ဦးနှောက်ကိုတုန့်ပြန် modulates ။ ဂျေ neuroscience ။ 2001; 21: 2793-2798 ။ [PubMed]
5 ။ Berthoud HR ။ အစားအစာစားသုံးမှု၏ထိန်းချုပ်မှုရှိ "သိမြင်မှု" နှင့် "ဇီဝဖြစ်စဉ်" ဦးနှောက်အကြားဆက်သွယ်မှုသည်။ Physiol ။ ပြုမူနေ။ 2007; 91: 486-498 ။ [PubMed]
6 ။ Bowirrat တစ်ဦးက, dopaminergic neurotransmission, အရက်နှင့်ဆုလာဘ်ချို့တဲ့ရောဂါအကြားအော်စကာ Berman အမ်ဆက်ဆံရေး။ ဂျေ Med ။ မျိုးရိုးဗီဇ။ ခအာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါ။ မျိုးရိုးဗီဇ။ 2005; 132 (1): 29-37 ။
7 ။ လုပ်ဖို့ပြုပါသို့မဟုတ်မပေးရန်ကြေးဝါကို M ကခန္ဓာကိုယ်ပိန်ချုံးနေပြီး P. : Self-ထိန်းချုပ်မှုများ၏အာရုံကြောလက်မှတ်။ ဂျေ neuroscience ။ 2007; 27: 9141-9145 ။ [PubMed]
8 ။ et al Breiter HC, Gollub RL ။ လူ့ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုအပေါ်ကိုကင်း၏ acute ဆိုးကျိုးများ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 1997; 19: 591-611 ။ [PubMed]
9 ။ ထောပတ် CM, Mishkin အမ်အခြေအနေများနှင့်မျောက်တွေကိုအတွက်တိုကျရိုကျ cortex ၏ရွေးချယ် ablations ပြီးနောက်အစားအစာဆုခခြံတုံ့ပြန်မှုမျိုးသုဉ်း။ Exp ။ Neurol ။ 1963; 7: 65-67 ။ [PubMed]
10 ။ Chen ကရီ, Ren J ကို, et al ။ စိတ်ကြွဆေး dopamine လွှတ်ပေးရန်နှင့်ကြွက် forepaw ၏လျှပ်စစ်ဆွကနေတဆင့်ဦးနှောက်ထဲမှာ hemodynamic တုံ့ပြန်မှု၏တားစီး။ neuroscience ။ လက်တ။ 2007 [EPub ရှေ့ဆက်ပုံနှိပ်၏]
11 ။ Dalley JW, Cardinal RN, et al ။ ကြွက်များတွင် Prefrontal အလုပ်အမှုဆောင်များနှင့်သိမြင်မှုလုပ်ဆောင်ချက်များကို: အာရုံကြောနှင့် neurochemical အလွှာဟာ။ neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ 2004; 28: 771-784 ။ [PubMed]
12 ။ Dalley JW, Fryer TD, et al ။ နျူကလိယ D2 /3receptors ရို Impulse နှင့်ကိုကင်းအားဖြည့်ကြိုတင်ခန့်မှန်း accumbens ။ သိပ္ပံ။ 2007; 315: 1267-1270 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
13 ။ Elliott သည် R ကို, Rubinsztein JS, Sahakian BJ, Dolan RJ ။ တစ်ဦး fMRI လေ့လာမှု: တစ်နှုတ်သွားလာရင်း / အဘယ်သူမျှမ-go task ထဲမှာစိတ်ခံစားမှုလှုံ့ဆော်မှုမှရွေးချယ်အာရုံစူးစိုက်မှု။ Neuroreport ။ 2000; 11: 1739-1744 ။ [PubMed]
14 ။ Epstein LH, ဗိမာနျတျော JL ။ အဝလွန်နှင့် nonobese လူသားတွေအတွက်စားနပ်ရိက္ခာအားဖြည့်ခြင်း, dopamine D2 အဲဒီ receptor genotype, နှင့်စွမ်းအင်စားသုံးမှု။ ပြုမူနေ။ Neurosc ။ 2007; 121: 877-886 ။
15 ။ ဖန် YJ, သောမတ်စ် Gn, et al ။ အဆိုပါ dopamine D2 receptor မျိုးရိုးဗီဇ TaqI polymorphic နှင့်အဝလွန်ခြင်းနှင့်သွေးတိုးရောဂါများအကြားချိတ်ဆက်ထားတဲ့ထိခိုက်နစ်နာ pedigree အဖွဲ့ဝင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ int ။ ဂျေ Cardiol ။ 2005; 102: 111-116 ။ [PubMed]
16 ။ Fassino က S, Leombruni P ကို, et al ။ သဘောထားတွေမစားစိတ်ဓါတ်များ, အမူးရူးစားရောဂါနှင့်မပါဘဲအဝလွန်အမျိုးသမီးတွေအတွက်အမျက်ဒေါသ။ ဂျေ Psychosom ။ res ။ 2003; 54: 559-566 ။ [PubMed]
17 ။ Francis က S နဲ့, Rolls ET, et al ။ ဦးနှောက်နှင့်အရသာနှင့် olfactory ဒေသများနှင့်အတူ၎င်း၏ဆက်ဆံရေးအတွက်သာယာသောထိတွေ့၏ကိုယ်စားပြုမှု။ Neuroreport ။ 1999; 10: 453-459 ။ [PubMed]
18 ။ Friston KJ, Holmes က AP, et al ။ အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံရိပ်အတွက်စာရင်းအင်း parametric မြေပုံ: အထွေထွေ linear ချဉ်းကပ်။ Hum ။ ဦးနှောက် Mapp ။ 1995; 2: 189-210 ။
19 ။ Gallagher M က, McMahan RW, et al ။ ဂျေ neuroscience ။ 1999; 19: 6610-6614 ။ [PubMed]
20 ။ Gehring WJ, နိုက် RT ကို။ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအတွက် Prefrontal-cingulate interaction က။ သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2000; 3: 516-520 ။
21 ။ စတိန်း R ကို, Volkow ND ။ မူးယစ်ဆေးစွဲနှင့်၎င်း၏နောက်ခံ neurobiological အခြေခံ: အတိုကျရိုကျ cortex ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုအဘို့သက်သေအထောက်အထား neuroimaging ။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2002; 159: 1642-1652 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
22 ။ et al Grabenhorst က F, Rolls ET ။ အဆိုပါ orbitofrontal နှင့် pregenual cingulate cortical အပေါ်အထက်မှအောက်သို့လွှမ်းမိုးမှု: ဘယ်လိုသိမှတ်ခံစားမှုအရသာနှင့်အရသာမှကိုထိခိုက်တုံ့ပြန်မှု modulates ။ Cereb ။ cortex ။ 2007 ဒီဇင်ဘာ 1; [EPub ရှေ့ဆက်ပုံနှိပ်၏]
23 ။ Gunstad J ကိုပေါလုသည် RH အ, et al ။ ဓာတ်လှေကားခန္ဓာကိုယ်ဒြပ်ထုညွှန်းကိန်းမဟုတ်ရင်ကျန်းမာလူကြီးများအတွက်အလုပ်အမှုဆောင်ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ Compr ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007; 48: 57-61 ။ [PubMed]
24 ။ ဂုရ RE, Cowell PE, Latshaw တစ်ဦးက, Turetsky BI, မမေ့ဘူး RI က, အာနိုး SE, Bilker သည့် WB, ဂုရ RC ။ schizophrenia အတွက် dorsal နှင့် Orbital prefrontal မီးခိုးရောင်ကိစ္စ volumes ကိုလျှော့ချ။ Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2000; 57: 761-768 ။ [PubMed]
25 ။ Hamdi တစ်ဦးက, Porter J ကို, et al ။ အိုမင်းစဉ်အတွင်းအပြောင်းအလဲများကို: အဝလွန် Zucker ကြွက်များတွင် striatal D2 dopamine receptors လျော့နည်းသွားသည်။ ဦးနှောက်။ res ။ 1992; 589: 338-340 ။ [PubMed]
26 ။ Huang က XF, Zavitsanou K သည်, et al ။ Dopamine သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် D2 အဲဒီ receptor နာတာရှည်မြင့်မားသောအဆီဓာတ်စာ-သွေးဆောင်အဝလွန်ခြင်းမှကျရောက်နေတဲ့သို့မဟုတ်ခံနိုင်ရည်ကြွက်တွေမှာထု binding ။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက် Res ။ 2006; 175: 415-419 ။ [PubMed]
27 ။ et al Hugdahl K ကို Berardi တစ်ဦး။ လူ့ဂန္ထဝင်အေးစက်အတွက်ဦးနှောက်ယန္တရားများ: တစ်ပေသွေးစီးဆင်းမှုလေ့လာမှု။ NeuroReport ။ 1995; 6: 1723-1728 ။ [PubMed]
28 ။ Hurd YL, ဆူဇူကီးက M, et al ။ D1 နဲ့လူ့ဦးနှောက်တစ်ခုလုံး hemisphere ကဏ္ဍများအတွက် D2 dopamine အဲဒီ receptor mRNA စကားရပ်။ ဂျေ Chem ။ Neuroanat ။ 2001; 22: 127-137 ။ [PubMed]
29 ။ Huttunen J ကို, Kahkonen S က, et al ။ evoked သံလိုက်စက်ကွင်းကနေသက်သေအထောက်အထား: ကျန်းမာသောလူသားမြားအတွက် somatosensory cortical တုံ့ပြန်မှုတခုတခုအပေါ်မှာစူးရှ D2-dopaminergic ပိတ်ဆို့ထားခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ Neuroreport ။ 2003; 14: 1609-1612 ။ [PubMed]
30 ။ ဂျွန်ဆင် TN ။ အဆိုပါ globus pallidus နှင့်မျောက်အတွက် precommissural caudate နျူကလိယနှင့် putamen အတွက်ရွေးချယ်ထားရှိတွေ့ရှိရပါသည်၏ substantia nigra အတွက်မြေမျက်နှာသွင်ပြင်စီမံကိန်းများ။ Exp ။ အာရုံကြော။ 1971; 33: 584-596 ။
31 ။ JönssonဥပမာNöthen MM, et al ။ အဆိုပါ dopamine D2 receptor မျိုးရိုးဗီဇနှင့်ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်း striatal dopamine အဲဒီ receptor သိပ်သည်းဆ၎င်းတို့၏ဆက်ဆံရေးအတွက် polymorphic ။ Mol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1999; 4: 290-296 ။ [PubMed]
32 ။ ကယ်လီ AE ။ မှတ်ဉာဏ်နှင့်စွဲ: shared အာရုံကြော circuitry နှင့်မော်လီကျူးယန္တရားများ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2004; 44: 161-179 ။ [PubMed]
33 ။ Killgore WD, Young ကအေဒီ, et al ။ အနိမ့်ကယ်လိုရီအစားအစာများကိုနှိုင်းယှဉ် high- ၏ကြည့်ရှုနေစဉ်အတွင်း cortical နှင့် limbic activation ။ Neuroimage ။ 2003; 19: 1381-1394 ။ [PubMed]
34 ။ Klein က TA, နျူမန်ဂျေ, et al ။ အမှားများမှသင်ယူအတွက်မျိုးရိုးဗီဇစိတ်ပိုင်းဖြတ်ကွဲပြားခြားနားမှု။ သိပ္ပံ။ 2007; 318: 1642-1645 ။ [PubMed]
35 ။ Koob gf, Bloom FE ။ မူးယစ်ဆေးမှီခို၏ဆယ်လူလာနှင့်မော်လီကျူးယန္တရားများ။ သိပ္ပံ။ 1988; 242: 715-723 ။ [PubMed]
36 ။ Kuo ကဟောင်ကောင်, ဂျုံးစ် RN, Milberg WP, Tennstedt S က, Talbot L ကို, မောရစ်ဖြစ်မှု, Lipsitz LA က။ သိမှုကပုံမှန်-အလေးချိန်အတွက် function ကို, အဝလွန်နှင့်အဝလွန်အဟောင်းတွေလူကြီးများ: လွတ်လပ်သောနှင့်အရေးပါသောသက်ကြီးရွယ်အိုများအားဆောင်များတွင်များအတွက်အဆင့်မြင့်သိမှုသင်တန်းတစ်ခုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ဂျေ Am ။ သက်ကြီးရွယ်အိုများ။ Soc ။ 2006; 54: 97-103 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
37 ။ Kuo က MF, Paulus W က, et al ။ dopamine အားဖြင့် focal-သွေးဆောင်ဦးနှောက် plasticity တိုးမြှင်။ Cereb ။ cortex ။ 2007 [EPub ရှေ့ဆက်ပုံနှိပ်၏]
38 ။ le DS, Pannacciulli N ကို, et al ။ အစာစားတုန့်ပြန်လက်ဝဲ dorsolateral prefrontal cortex ၏လျော့နည်း activation: အဝလွန်တဲ့အင်္ဂါရပ်။ နံနက်။ ဂျေ Clin ။ Nutr ။ 2006; 84: 725-731 ။ [PubMed]
39 ။ le Doux je ။ ဇီဝကမ္မဗေဒ၏လက်စွဲစာအုပ်။ ခုနှစ်တွင်: Plum က F, Mountcastle vB, အယ်ဒီတာများ။ နံနက်။ Physiol ။ Soc ။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: 1987 ။ စစ။ 419-459 ။
40 ။ Libet B, Gleason, CA, et al ။ ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုစတင်ခြင်း (စေတနာ-အလားအလာ) မှစပ်လျဉ်းလုပျဆောငျဖို့သတိရည်ရွယ်ချက်ကို၏အချိန်။ တစ်လွတ်လပ်စွာဆန္ဒအလျောက်လုပ်ရပ်များ၏သတိလစ်စတင်။ ဦးနှောက်။ 1983; 106: 623-642 ။ [PubMed]
41 ။ Logan J ကို, Volkow ND, et al ။ မော်ဒယ် Simulator နှင့်ပေအချက်အလက်များ၏ kinetic ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: [11C] ဦးနှောက်အတွက် binding raclopride အပေါ်သွေးစီးဆင်းမှု၏ဆိုးကျိုးများ။ ဂျေ Cereb ။ သွေးစီးဆင်းမှု Metab ။ 1994; 14: 995-1010 ။ [PubMed]
42 ။ Logan J ကို, မုဆိုး JS, et al ။ အချိန်လှုပ်ရှားမှုတိုင်းတာကနေနောက်ပြန်လှည်စည်းနှောင်၏ graphical ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ဂျေ Cereb ။ သွေးစီးဆင်းမှု Metab ။ 1990; 10: 740-747 ။ [PubMed]
43 ။ MM Mesulam ။ အပြုအမူ Neurology ၏အခြေခံမူ။ Davis က; Philadelphia တွင်: 1985 ။
44. Mirabella G. အ Endogenous တားစီးမှုနှင့်“ အခမဲ့မဟုတ်” ဟူသောအာရုံကြောဆိုင်ရာအခြေခံသည်ဂျေနူးရော့စီ။ 2007; 27: 13919-13920 ။ [PubMed]
45 ။ Mukherjee က J ကို, ခရစ်ယာန် BT, et al ။ ပုံမှန်စေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွက် 18F-fallypride ၏ဦးနှောက်ပုံရိပ်: အသှေးကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, ဖြန့်ဖြူး, စမ်းသပ်မှု-retest လေ့လာမှုများနှင့် dopamine D-2 / D-3 receptors အပေါ်အိုမင်းသက်ရောက်မှုမှ sensitivity ကို၏ပဏာမအကဲဖြတ်။ synapses ။ 2002; 46: 170-188 ။ [PubMed]
46 ။ Murase S က, Grenhoff J ကို, Chouvet, G, Gonon အပြည်ပြည်သွား, Svensson TH ။ Prefrontal cortex Vivo အတွက်လေ့လာခဲ့ကြွက် mesolimbic dopamine အာရုံခံအတွက်ကွဲပစ်ခတ်ရန်နှင့် transmitter ကိုလွှတ်ပေးရန်ထိန်းညှိ။ neuroscience ။ လက်တ။ 1993; 157: 53-56 ။ [PubMed]
47 ။ Oades RD, Halliday GM က။ Ventral tegmental (A10) စနစ်: neurobiology 1 ခန္ဓာဗေဒနှင့်ဆက်သွယ်မှု။ ဦးနှောက် Res ။ 1987; 434: 117-165 ။ [PubMed]
48 ။ အော့ဒန်ဝင်း J ကို, ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုနှင့်မွတ်မပြေနိုင်သောအဘို့တွေကိုမှ Wardle ဂျေသိမှုထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းနဲ့ sensitivity ကို။ Physiol ။ ပြုမူနေ။ 1990; 47: 477-481 ။ [PubMed]
49 ။ et al Pannacciulli N ကို, Del Parigi တစ်ဦးက, ချန် K သည်။ လူ့အဝလွန်ခြင်းအတွက်ဦးနှောက်မူမမှန်: တစ် voxel-based morphometric လေ့လာမှု။ Neuroimage ။ 2006; 31: 1419-1425 ။ [PubMed]
50 ။ Pignatti R ကို, Bertella L ကို, et al ။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချအဝလွန်ခြင်းအတွက်: အလောင်းကစားလုပ်ငန်းတာဝန်သုံးပြီးလေ့လာမှုတစ်ခု။ စားသည်။ အလေးချိန် disorders ။ 2006; 11: 126-132 ။ [PubMed]
51 ။ et al Pliquett ru, Führer: D ။ အစာစားချင်စိတ်စည်းမျဉ်းအပေါ်ဗဟိုအာရုံကြော system- အာရုံအပေါ်အင်ဆူလင်၏ဆိုးကျိုးများ။ Horm ။ Metab ။ res ။ 2006; 38: 442-446 ။ [PubMed]
52 ။ Pohjalainen T က, Rinne Jo, et al ။ လူ့ D1 dopamine receptor မျိုးရိုးဗီဇကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွက်အနိမ့် D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုခန့်မှန်းထားပါတယ်။ ၏ A2 allele Mol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1998;3(3): 256-260 ။ [PubMed]
53 ။ Postuma RB, 126 positron ထုတ်လွှတ် tomography နှင့် functional သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်စာပေတစ် Meta-analysis သည်အပေါ်အခြေခံပြီး Dagher အေဘီစီစီအမျိုးအစား ganglia functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှု။ Cereb ။ cortex ။ 2006; 16: 1508-1521 ။ [PubMed]
54 ။ ray JP, စျေး JL ။ ဂြိုဟ်တုပတ်လမ်းဖို့ thalamus ၏ mediodorsal နျူကလိယကနေစီမံကိန်းကိုအဖွဲ့အစည်းနှင့်ဟာ Macaque မျောက်အတွက် prefrontal cortex medial ။ comp ။ Neurol ။ 1993; 337: 1-31 ။
55 ။ Ritchie T က, Noble EP ။ ဦးနှောက်အဲဒီ receptor-binding ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အတူ D2 dopamine receptor မျိုးရိုးဗီဇခုနစ် polymorphic ၏အသင်းမှ။ Neurochem ။ res ။ 2003; 28: 73-82 ။ [PubMed]
56 ။ Robbins TW ။ ရွှေ့ပြောင်းနှင့်ရပ်တန့်: နံရံပစ်ကစားနည်း-striatal အလွှာ, neurochemical မော်ဂျူနှင့်လက်တွေ့သက်ရောက်မှု။ ဖီလို။ ဖြတ်ကျော်။ R. Soc ။ Lond ။ ခ Biol ။ သိပ္ပံ။ 2007; 362: 917-932 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
57 ။ Rolls ET, McCabe C. cravers vs. Non-cravers အတွက်ချောကလက်၏အကျိုးသက်ရောက်စေဦးနှောက်ကိုကိုယ်စားပြု Enhanced ။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ neuroscience ။ 2007; 26: 1067-1076 ။ [PubMed]
et al 58 Rossini RM, Bassetti MA ။ ပျမ်းမျှအာရုံကြော somatosensory အလားအလာ evoked ။ ပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက်တိုကျရိုကျသောအပိုငျးမြား၏ Apomorphine-induced ယာယီစွမ်းဆောင်နိုင်မှု။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား။ Clin ။ Neurophysiol ။ 1995; 96: 236-247 ။ [PubMed]
59 ။ Schoenbaum, G, Chiba AA ကို, et al ။ Orbitofrontal cortex နဲ့ basolateral amygdala အန်ကုက်လုပ်ပါလေ့လာသင်ယူနေစဉ်အတွင်းရလဒ်များမျှော်မှန်းထားသည်။ နတ်။ neuroscience ။ 1998; 1: 155-159 ။ [PubMed]
60 ။ Sturm R. ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပြဿနာများနှင့်ကုန်ကျစရိတ်အပေါ်အဝလွန်ခြင်း, ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း, အရက်သောက်ခြင်း၏ဆိုးကျိုးများ။ ကနျြးမာရေး AFF ။ (Millwood) 2002; 21: 245-253 ။ [PubMed]
61 ။ Suhara T က, sudo Y ကို, et al ။ int ။ ဂျေ Neuropsychopharmacol ။ 1999; 2: 73-82 ။ [PubMed]
62 ။ Tataranni PA ဆိုပြီး, DelParigi အေ Functional neuroimaging: အဝလွန်သုတေသနလူ့ဦးနှောက်ကိုလေ့လာမှုအသစ်တစ်ခုမျိုးဆက်။ အဝလွန်ခြင်း။ ဗျာ 2003; 4: 229-238 ။ [PubMed]
63 ။ et al Tataranni PA ဆိုပြီး, Gautier JF ။ positron ထုတ်လွှတ် tomography သုံးပြီးလူသားတွေအတွက်ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုနှင့် satiation ၏ Neuroanatomical Correlate ။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ အမေရိကန်အေ 1999; 96: 4569-4574 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
64 ။ Thanos PK, Michaelides M က, et al ။ In-Vivo muPET ပုံရိပ် ([2C] raclopride) နှင့် In-စသည်တို့ ([2H] spiperone) autoradiography နှင့်အတူအကဲဖြတ်အဖြစ်စားနပ်ရိက္ခာကန့်သတ်သိသိသာသာအဝလွန်တဲ့ကြွက်မော်ဒယ်အတွက် dopamine D11 အဲဒီ receptor (D3R) တိုးပွားစေပါသည်။ synapses ။ 2008; 62: 50-61 ။ [PubMed]
65 ။ Tremblay L ကို, မျောက် orbitofrontal cortex အတွက် Schultz ဒဗလျူဆွေမျိုးဆုလာဘ် preference ကို။ သဘာဝ။ 1999; 398: 704-708 ။ [PubMed]
66 ။ Volkow ND, ဝမ် GJ, et al ။ detoxified အရက်သမားအတွက် striatum အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန်အတွက်လေးနက်လျှောက်လျော့နည်း: ဖြစ်နိုင်သော orbitofrontal ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ ဂျေ neuroscience ။ 2007; 27: 12700-12706 ။ [PubMed]
67 ။ Volkow ND, ဝမ် GJ, et al ။ အရက်မိသားစုများ၏ထိခိုက်အင်္ဂါများ၌ dopamine D2 receptors ၏မြင့်မားသောအဆင့်အတန်း: တတ်နိုင်သမျှအကာအကွယ်အချက်များ။ Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2006; 63: 999-1008 ။ [PubMed]
68 ။ Volkow ND, ဝမ် GJ, et al ။ ဦးနှောက် dopamine လူသားတွေအတွက်စားအပြုအမူတွေနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ int ။ ဂျေစားပါ။ disorders ။ 2003; 33: 136-142 ။ [PubMed]
69 ။ Volkow ND, Chang က L ကို, et al ။ စိတ်ကြွဆေးချိုးဖောက်မှုများဦးနှောက် dopamine D2 receptors ၏အနိမ့်အဆင့်: အ orbitofrontal cortex အတွက်ဇီဝြဖစ်တွေနဲ့ပေါင်းသင်း။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2001; 158: 2015-2021 ။ [PubMed]
70 ။ Volkow ND, ဝမ် GJ, et al ။ လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာ [11C] raclopride နှင့်အတူ endogenous dopamine ယှဉ်ပြိုင် Imaging ။ synapses ။ 1994; 16: 255-262 ။ [PubMed]
71 ။ Volkow ND, မုဆိုး JS, et al ။ 11C ၏ထပ်ခါတလဲလဲအစီအမံများ Reproducibility လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာ binding raclopride ။ ဂျေ Nucl ။ Med ။ 1993a; 34: 609-613 ။ [PubMed]
72 ။ Volkow ND, မုဆိုး JS, et al ။ dopamine D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုကိုကင်းချိုးဖောက်လျှော့တိုကျရိုကျဇီဝြဖစ်နှင့်ဆက်စပ်သည်လျော့သွားသည်။ synapses ။ 1993b; 14: 169-177 ။ [PubMed]
73 ။ ဝမ် GJ, Volkow ND, et al ။ အဝလွန်ဘာသာရပ်များအတွက်ပါးစပ် somatosensory cortex ၏ Enhanced ကျိန်းဝပ်လှုပ်ရှားမှု။ Neuroreport ။ 2002; 13: 1151-1155 ။ [PubMed]
74 ။ ဝမ် GJ, Volkow ND, et al ။ အဝလွန်ခြင်းအတွက်ဦးနှောက် dopamine ရောဂါဗေဒ၏သက်သေအထောက်အထား။ ကမ္ဘာကျော်ဆေးပညာဂျာနယ် Lancet ။ 2001; 357: 354-357 ။ [PubMed]
75 ။ ဝမ် GJ, Volkow ND, et al ။ ventricular ပျတိုးနှင့်ပေ, MRI နှင့် neuropsychological စမ်းသပ်ခြင်းများကအကဲဖြတ်အဖြစ် Normal နဲ့အရက်သမားအတွက် cortical ကျုံ့၏ functional အရေးပါမှု။ ဒီယိုရောင်ခြည်ကုသမှုပညာ။ 1992; 186: 59-65 ။ [PubMed]
76 ။ အပြုအမူနှင့်အဝလွန်ခြင်းစား Wardle ဂျေ။ အဝလွန်ခြင်းပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ။ 2007; 8: 73-75 ။ [PubMed]
77 ။ ဝံပုလွေ PA ဆိုပြီး, Beiser တစ်ဦးက, ဧလိယ MF, au R ကို, Vasan RS, သိမြင် function ကိုမှအဝလွန်ခြင်း၏ Seshadri ကအက်စ်ဆက်ဆံရေး: ဗဟိုအဝလွန်ခြင်း၏အရေးပါမှုနှင့် concomitant သွေးတိုးရောဂါ၏များ၏ညှိနှိုင်းသြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ အဆိုပါ Framingham နှလုံးလေ့လာပါ။ Curr ။ အယ်လ်ဇိုင်းမား Res ။ 2007; 4: 111-116 ။ [PubMed]
78 ။ Weingarten HP က။ မုန့်ညက်စတင်အတွက်သင်ယူမှုများအတွက်အခန်းကဏ္ဍ: အေးစက်တွေကို sated ကြွက်များတွင်အစာကျွေးထုတ်ယူ။ သိပ္ပံ။ 1983; 220: 431-433 ။ [PubMed]
79. Zgaljardic DJ, Borod JC, Foldi NS, Mattis PJ, Gordon MF, Feigin A, Eidelberg D. Parkinson ရောဂါရှိ frontostriatal circuitry နှင့်ဆက်စပ်သောအလုပ်အမှုဆောင်ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုစစ်ဆေးခြင်း။ ဂျေ Clin ။ Exp ။ Neuropsychol ။ 2006; 28: 1127-1144 ။ [PubMed]
80 ။ et al Zink CF, Pagnoni, G, ။ အဓိက nonrewarding လှုံ့ဆော်မှုမှလူ့ striatal တုံ့ပြန်မှု။ ဂျေ neuroscience ။ 2003; 23: 8092-8097 ။ [PubMed]